Zvokufambisa zveruzhinji zvichave sei muIstanbul kwemazuva mana? Metro Metrobus uye Ferry Work? | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulZvokufambisa zveruzhinji zvichave sei muIstanbul kwemazuva mana? Metro Metrobus uye Ferry Work?
15 / 05 / 2020 34 Istanbul, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metro, TURKEY, chitima
Sei pevhu, metrobus uye ferries akamhanyiswa Istanbul masikati?
Nguva yekudzivirira, yakaziviswa panguva nenguva nekuda kweiyo Covid-19 denda, ichaiswawo kubva 16 kusvika 19 Chivabvu. Panguva iyo vagari veIstanbul vachigara mudzimba dzavo zvichitevera kurambidzwa kudzoka kwemazuva mana, mazhinji eiyo İBB nemahara ayo anoenderera mberi nemabasa avo pasina kukanganisa kuti guta rive nerunyararo uye kuti zvinhu zvisapindirana. Kuve nemukana wekushanda mushe mumigwagwa yemuguta uye migwagwa munzira dzekudzidziswa zvakaziviswa pakutanga, IMM ichave nemukana wekuzadzisa zvirongwa zvavanoita mumazuva mana anotevera nekukurumidza.
Mukati meyero yeCovid-19 njodzi yedanho, Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ichaenderera mberi nemabasa ayo kuvagari veIstanbul vane 16 vashandi panguva yekuma19-zuva rekudzoka, ichave iri pakati pegumi nematanhatu kusvika Chivabvu. Kuwedzera kune zvakakosha zvinodiwa senge zvekufambisa, mvura, gasi rechisikwa nechingwa, İBB, iyo ichaenderera nemabasa ayo ekuchengetedza pamwe nekushandisa miriwo, michero, vakwegura uye vakaremara kuchengetedza, mabasa emariro, kuraswa kwekurapa uye kwakasimba tsvina, timu yehutsanana, ALO 4, nzvimbo yekuvaka inoshanda, haizoshayikwe. Mune nguva dzekudzidziswa dzambotaurwa, IMM yaive nemukana wekupedza nekukurumidza nekufambira mberi kuri kuita mapurojekiti umo mota pamwe nekufamba kwevanhu munzira kwakanyanya, nekuda kwekurasa kwemigwagwa yemuguta nemigwagwa. the İSKİ KadıköyMuSeyit Ahmet Creek, mimwe mapurojekiti anoitwa paOrakakyy bhishi achazopedzwa kare kupfuura nguva yakatarisirwa kupedzwa uye anozoiswa mukushandira pakupera kwaJune.
Zvikwata zvehutsanana zve mobile zve IMM Health department zvichaenderera mberi nehutsanana mabasa muzvikoro zvehurumende nezvipatara. Kuti varatidze hutachiona hwekunze, vashandi gumi vanoenderera mberi nemabasa avo kwemazuva mana nemota 10 uye nezvekutapira mumba, vashandi makumi mana neshanu vanoenderera mberi nemabasa avo neMugovera, Svondo neMuvhuro nemotokari makumi matatu. Kuti vakwanise kurwisa umhutu hwakakonzerwa nekudziya kwemamiriro ekunze, vashandi makumi mana nevaviri vachapfira mate muguta muguta reMuvhuro.
ISPARK KUPAKWA MPANDA DZAKAIPA
İSPARK yokupaka nzvimbo ichavharwa kwemazuva mana. Nekudaro, kuitira kudzivirira chero matambudziko pamazuva ekurambidzwa, 4 ISPARK vashandi vese, kusanganisira iyo Headquarters, Vamwe Vanovhura uye Storey Car Parks, Alibeyköy Cep Bus Station P + R, İstinye uye Tarabya Marina, Bayrampaşa Vegetable-Fatso Market uye Kozyatağı Vegetable-Fruit Market. achange ari pabasa.
ISKI ICHIENDA KUNA ZVINOGONA KUSHANDA BASA
Munguva yekudzoka, İSKİ ine mukana wekushanda zvakanyanya zvakanaka nekuda kwemota inorema uye traffic yevanhu. Iwo mapurojekiti, ayo achazopedzwa munguva refu, anofambira mberi nekukurumidza zvikuru nekuda kwemazororo nemigwagwa. Pasi pezuva rechina-kurambidzwa kudzikwa nguva, İSKİ ichaita basa rayo kunzvimbo makumi mana dzakasiyana muIstanbul pamvura ine tsvina, mvura yemvura, kurukova kwemvura uye kunwa mvura, nevashandi zviuru zvishanu nemazana mashanu.
MIBVUNZO DZINOTAURA '
Pendik Ankara Caddesi (Sabiha Gökçen Airport Road), Kartal Meydan, Kartal Cengiz Topel Caddesi, Kartal Karlıktepe, Kadıköy Doko, Kadıköy E-5 Underpass, Kadıköy Dinlenç Creek, Üsküdar Beach, Üsküdar Square, Üsküdar Libadiye Caddesi, Ümraniye Tantavi Tunnel Underpass, Ümraniye Küçüksu Caddesi, Beykoz Ali Bahadır Creek, Ataşehir Libadiye Caddesi, Tuzla Birlik.
GUTA RICHAITWA, DZEMAHARA DZESVONDO DZINOGONESWA DZINOGONESWA
İSTAÇ, yekushambadzira michina, kutsvaira kwechimiro uye kutsvaira munzvimbo munzvimbo dzeveruzhinji dzakadai semigwagwa mikuru, maturu, Marmaray nemasaini epasi pemvura, mapasita - pasi pepasi, mabhesi epasi / masitepisi, Bayrampaşa uye Ataşehir States, zvipatara, uye akasiyana masangano eruzhinji nemasangano. acharamba achitsvaira basa kwemazuva mana pasina kukanganisa.
Mumabasa ekuchenesa anoitiswa ne İSTAÇ kwemazuva mana, iyo nzvimbo yemamirioni mazana maviri nemakumi maviri nenomwe zviuru mazana mashanu emakumi mashanu emakiromita (saizi yemamita makumi matatu nemasere emabhora) ichave yakabviswa, nenzvimbo yemamirioni mazana matanhatu nemakumi mairi nemazana mashanu nemakumi masere nemakumi masere emamiririta (anenge saizi yemazana maviri emakumi mairi nemakumi mairi nemakumi mairi emakiromita. .
RUGWARO RWEZVO RWAKAgadzirwa
İSTAÇ, panguva yekushanya kwemusi wa Chivabvu 16-17-18-19, inogeza nzira mumakuva uye nenzvimbo dzayo dziri pasi peiyo CBB Cemeteries department, iyo yakakodzera basa rekushambidza michina, uye ichagadza neruoko zvikwata zvinotsvaira kuti zvichenese nzvimbo idzo mota dzinotadza kupinda. Pakupera kwemazuva mana, mota dzichange dziri 4 times uye 141 vashandi vanenge vari pabasa.
KUSVIRA KWAKAIPA UYE DZESHURE DZESHURE
Padivi reAsia neEuropean, anenge matani makumi maviri nematatu emadhora ezvekurapa, kusanganisira nzvimbo dzekugara, achaunganidzwa nemotokari makumi manomwe nemaviri nemakumi matatu nevashandi mazana matatu nemaviri. Vashandi ve245 vachashandira kuraswa. Huwandu hwevashandi ve İSTAÇ vanozoshanda kwemazuva mana vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nemashanu.
HAPANA NYAYA DZESVONDO DZESVONDO
İGDAŞ ichashanda nevane zviuru zvina mazana masere nemazana masere nemakumi mana nevatanhatu vashandi vekuchinja, kunyanya 7/24 Zvipingamupinyi Mhinduro dzechimiro, 187 Natural Natural Emergency Runhare Line Center uye zvikwata zvezvinhu, kuendesa gasi rezvisikwa kunzvimbo dzese dzeIstanbul pasina kukanganisa uye zvakachengeteka.
Ichashanda 621 vashandi muCity Lines, ngarava, piers uye Haliç Shipyard. Pakati pemazuva mana, rwendo rwakazokwana makumi maviri nemasere, makumi maviri neshanu richaitwa pamatanho matanhatu, pamakungu gumi nemashanu, ngarava gumi nemumwe uye 4 dhamuti.
Mitsetse inofanirwa kushandirwa:
KUSIMBISA KUSI KUTI KUTI Uwedzere
IETT ichaita zviuru makumi mana nezvitatu makumi matatu nemakumi matatu nematanhatu nzendo mukati memazuva mana-mazuva. Dzemotokari 4 dzese dzichagoverwa kuzvipatara zvevanhukadzi makumi maviri neshanu.
Izvo zvakasarudzwa kunyorera nguva yekuvharirwa kwemazuva mana, Mugovera, Svondo, Muvhuro neChipiri. Vazhinji vagari, vakadai sevaya vari kushanda mukushandira voruzhinji, vashandi vezvehutano, vezvemishonga, vekubheka, vacharamba vachienda kumabasa avo mumazuva ekurambidzwa. IETT ichaenderera nendege dzayo kusvika 4:01 Chitatu manheru kweIstanbulites vanofanirwa kuenda kubasa. Mumazuva maviri ekutanga evhavha, ndiko kuti, Mugovera neSvondo, kudzamara vanhu zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi mana nenomwe. NeMuvhuro neChipiri, zviuru gumi nezvisere zvemazana mazana masere nemakumi mairi nemazana manomwe emadhiza mazana maviri mazana maviri nemasere emadhora. Motokari dzinotakura nzvimbo dzinochengeterwa mapepa ekukasira pamitsetse, uye kana kudikanwa kukaitika, anonanga kumitsara yakakodzera.
Pamusoro pezvo, huwandu hwezvipatara zvakazvimirira 4 uye zveveruzhinji zvakagoverwa kumotokari mumazuva mana ekurambidzwa. Dzose mota 91 dzakanzi dzishandire vashandi vemuchipatara nemugovera, Svondo, Muvhuro neChipiri.
Pamutsetse weMetrobus, pachava nendege-maminetsi matatu kubva pakati pa 06 mangwanani na10 mangwanani nemugovera neSvondo. Pachave nekubuda pachena pakati pegumi negumi nemaminitsi gumi ega ega. Zvekare, pakati pegumi nematanhatu uye 3 nzendo dzinozoitwa yega maminetsi matatu. Nhandare kubva pamakumi maviri kusvika makumi maviri nemasere dzichaitwa maminitsi gumi nemashanu.
Musi weMuvhuro neChipiri, pachave nendege nguva yega yega maminitsi matatu pakati pa06 na10 mangwanani, maminitsi gumi ega ega pakati pegumi nagumi nematanhatu, maminitsi matatu ega ega pakati pegumi nematanhatu, uye maminitsi gumi ega ega pakati pegumi nemakumi maviri neshanu.
Nguva yenguva Chivabvu 16-17 Chivabvu 18-19
06: 00 - 10: 00 3 maminitsi 3 maminitsi
10: 00 - 16: 00 10 maminitsi 10 maminitsi
16: 00 - 20: 00 3 maminitsi 3 maminitsi
20: 00 - 00: 00 15 maminitsi X
20: 00 - 01: 00 X 10 maminitsi
LIVE BROADCAST Kubva BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Munguva yekurara kwemazuva mana, Boğaziçi Yönetim AŞ achange ari pamunda mu İBB masevhisi, mapati uye nzvimbo dzinoshandiswa nevagari veIstanbul, ine timu yegumi nemazana emazana evashandi vane hunyanzvi uye yekuchenesa vashandi.
Uye zvakare, kune vabereki vanozoshandisa nguva vari pamba nekuda kwekurambidzwa, Nyanzvi Psychologist Ceyda Yanar vachasangana nevateereri nekutaura nezvenyaya ye "Vana uye kushushikana kwekutarisira panguva yePandemic" munhepfenyuro yehupenyu kubva kuBoğaziçi Yönetim Instagram account neSvondo nenguva dza 16:00.
BASA REMAHARA RINOGADZIRA
İSTON, Hacı Osman Grove, kuona nyika, Kadıköy Kurbağalıdere Yogurtçu Park Gungwa dhizaini uye nzvimbo pakati peModa, Atatürk Olimpiki nhandare yekutenderera nyika, Beylikdüzü uye Avcılar vanofamba netsoka vanopfuura nekugadziriswa nekugadziriswa, Greater Istanbul Bus terminal padanho gadziriso, Göztepe Metro Station, Kağıthane Metro Station Kupinda Gwara reKuenda. Road Yakasimbiswa Kongiri Wall uye Underpass Kuronga, Yeni Mahalle Metro Station, Karadeniz Mahallesi Metro Station, landscaping, Güngören Kale Center chekufambisa traffic kuronga, Hasan Tahsin Street pedestrian nharaunda nzvimbo kurongeka, IETT Garage uye Havaist Platifomu Nzvimbo Kuvaka, Saltuk Buğrahan Street Concrete Pavement Basa Rokuvaka, Bağlar Caddesi Concrete Pavement Kuvaka, laramlar Caddesi pedestrian nharaunda kuronga, Sarıyer Özdereiçi kuvaka kwemadziro emabwe, Beylikdüzü Cemevi mumigwagwa pombi gadziriro icharamba ichishanda pane nzvimbo nzvimbo dzeguta.
Basa richaitwawo mukuchengetedza nekugadziridza mapurojekiti emapaki evana akasiyana siyana pasi peDirectorate of Parks and Gardens. Mune ino mamiriro, iyo yakazara ye779 ISTON uye subcontractor vashandi vanozoshanda. Uye zvakare, kugadzirwa kuchaitwa pasina kukanganisa pa interSTON Hadımköy uye kuTuzla mafekitori pakati pa 16-19 Chivabvu.
17 DZIMWE 840 TON ASPHALT YEKUTENGA YAKADZWA
İSFALT ichave iri pamunda paine 853 vashandi vekuita basa rekugadzira asphalt nemabasa ekunyora asphalt uye vashandi makumi maviri nevaviri kuti ibatwe.
Zvidzidzo muchirongwa ichi; Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kadıköy, Büyükçekmece, Sarıyer, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar uye Bakırköy. Hwerengedzo yematani 17 matani easphalt application yakarongwa.
CHINYENGETI CHINOTAURA HAKUNOGADZIRA
Mota 270, 270 vatyairi vashandi, 270 vashandi vezvemagariro pamwe nevashandi 270 vanoshanda vanozoshandirwa kuendesa mapakeji ekubatsira kune vagari vedu vanoshaya vakatemerwa neveSocial Services Directorate
Zvokufambisa, simba remuchadenga, nzvimbo yekubikira nekubvisa hutachiona zvinozoenderera mberi nemisi nenguva kuitira kuti mabasa eruzhinji anoitwe pasina kukanganisa.
KUGADZIRA uye IFTAR YAKAZADZWA
Logistics Support Center ichaenderera mberi ichishanda maawa makumi maviri nemaviri pazuva kuti mabasa ekuti veruzhinji vafambiswe zvakanaka uye kuti mabasa eruzhinji anogona kurambidzwa. Iftar uye Sahur chikafu chinodikanwa chinogadziriswa uye chinoendeswa kune 24 vashandi vekugadzira moto uye vanodzima moto mumakicheni manomwe emoto.
Logistics Support Center Mamwe masevhisi anofanirwa kupihwa kwemazuva mana aya anotevera;
- Mahwendefa eNairi 153, Dhipatimendi reMakuva, Mapurisa emunharaunda uye nevashandi vese vanotarisira, iftar, uye sahur mirairo ichaendeswa kumahofisi avo.
-Zvekudya uye zvinwiwa zvinodikanwa zvevagari vedu mumusasa usina dzimba zvicharamba zvichisangana.
- Iftar, vangangosvika zviuru gumi zvevanhu vachagadzirira maseneta anodikanwa.
-Zvekudya uye zvinwiwa zvinodikanwa zvevashandi vehutano hwekugara mumahotera zvinosangana.
ALO 153 makumi mairi makumi maviri nemaviri Pakudya
Alo 153 call centre, iyo inopa rubatsiro mune zvese zvikamu zveIstanbul, ichashanda maawa makumi maviri nemana pazuva pazuva rekubva. Huwandu hwevashandi hwekushandira sechibhendi hunosvika makumi matanhatu nematanhatu.
IMM icharonga zviitiko 19 Chivabvu munzvimbo yedhijitari nekuda kwematanho ekudzivirira uye kudzoka kumba. Concerts kuti igoverwe kubva kumagariro ezvenhau nhoroondo yeIMM Culture department pakati pegumi neshanu May; Zvinyorwa, firimu uye mitambo yemitambo uye nezvimwe zviitiko zvakawanda zvichagonesa vagari veIstanbul kunakidzwa nemutambo wemisha yavo.
4-ZUVA ZVINOGONESESA DZIDZO KUSVIRA SPORTS ISTANBUL
SporTS ISTANBUL, uri Muvhuro, Chivabvu 18, pakati pa 21:00 na 22:00 @ ıbbsporistanbul iwetube channels uye chess tv iwetube İBB Spor İstanbul Online Chess Kuratidzira Husiku hwekupedzisira ichatepfenyurwa pachiteshi chayo. Live nhepfenyuro machesi, chess mutambi iwetubeSabri Anogona kududzira pamwe nemutungamiriri Gürcan Engel naThelha Emre Akıncıoğlu. Uye zvakare, Renay Onur, General Manager weSpor Istanbul, achapinda semuenzi.
Chivabvu 19 mazuva ekuvhurwa kweAtaturk Urban Sango inomhanya mumapoka uye kutora chikamu chevatambi venhabvu, mitambo yekushandiswa kwemagariro enhau Istanbul, Istanbul Metropolitan Municipality Mapaki neGardens Directorate achashanda kutsigira zvinangwa.
Mamwe masevhisi anofanirwa kupihwa ne İBB vanobatana pa 16-17-18-19 ndeanotevera:
Istanbul Ruzhinji Chingwa: Icharamba ichishanda zvizere ne3 mafekitori, 514 mabuffets uye 364 vashandi.
İSBAK AŞ: Iyo metro siginecha, anoratidza masystem, programming, application, kuiswa uye kushanda ichaenderera ne108 vashandi muguta rose.
Beltur AŞ: Zvipatara makumi mana zvichashanda nevashandi vangangosvika mazana mana pamakumi mashanu nenomwe.
I İSTTELKO: Kuti uchengetedze zvigadzirwa zvese zvekukurukurirana pasina kukanganisa, Dhata Merkei icharamba ichishanda pasina kukanganisa, ine hunyanzvi hwevashandi vehunyanzvi makumi manomwe, gumi neshanu mumasevhisi eWIFI, 10 muWIFI masevhisi, 30 mumasevhisi eIT uye makumi maviri nematatu mumasevhisi enzvimbo.
İSTGÜVEN AŞ: Munguva ye4-zuva rekudzoka, vashandi 5 vacharamba vachishanda munzvimbo 860.
AĞAÇ AŞ: Sechikamu cheIstanbul-wide green area nharaunda kugadzirisa uye gadziriro, vashandi ve723 vanoenderera mberi nebasa ravo nemotokari makumi matatu nemakumi matatu.
IMM Cemeteries Dhipatimendi: Ichashanda nevashandi vangangosvika chiuru nemazana maviri nemakumi mairi nemazana matatu nemotokari dzesevhisi kuitira kuti mabasa arambe ari pasi.
Istanbul Fire Brigade: Ichashanda nemotokari makumi masere nemasere nemakumi masere nemapfumbamwe uye nevashandi vanosvika zviuru mazana maviri nenomwe.
IMM Mapurisa: Munguva yose yemazuva mana yekudzoka, vanhu zviuru makumi maviri nevaviri, mota 23 nezvikwata makumi maviri nemaviri zvichashanda mukuchinja, kure uye neimwe nzira. Ichapa masevhisi munzvimbo dzakawanda kubva mukudzora kwenzvimbo dzebasa dzinofanira kuvharwa kumusangano weizvo zvekufambisa zvevashandi vehutano.
Hamidiye AŞ: Ndichiri kuchengetedza kugadzirwa uye kutumirwa kwemazuva mana, musi waMay 4, ichagadzira mimwe michina. Vashandi veHofisi; kunze kwekunge paine kudiwa kwekukurumidza, nguva yekudzoka haizoshanda pamazuva iwayo. 19 vatengesi vacharamba vachishandira kwemazuva mana vaine makumi maviri nemaviri nemakumi matatu nemaviri emota uye vashandi mazana manomwe.
Zvifambiso zveParuzhinji zvichave sei mu Ankara kwemazuva mana?
Ko Metro naFerry Vanoshanda muKendendendi muIstanbul?
Ndeipi Nguva YeVhiki YeVashandi Vazhinji Yekufambisa muIstanbul ..? Metrobus, Bhazi,…
Bus Metro uye Steamers muIstanbul kuRamazan Bayrami
17 ndiro zuva rokutanga rokutakura vanhu muIstanbul
Nzvimbo DzeBusy dzeMaguta dzakavezwa Kwemazuva mana muMersin!